Sida aad u noqon lahayd qof la dhexgalo iyo dadka adiga oo kale ah ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Sida loo noqon karo dad badan oo la dhaqanka iyo sida dadka. Si ka duwan waxa ay dad badani u maleynayaan, qofna ma noqon karo mid fiican ama xumaan mar kasta. Dadka qaar ayaa laga yaabaa inay xishood badan yihiin, is dhex galiyaan, iyo kalsooni la'aan, laakiin had iyo jeer way leeyihiin jawaabo wanaagsan oo togan dadka ama xaaladaha qaarkood. Waxa kale oo ay dhacdaa in dadka baxay iyo kuwa firfircoon laga saari karo mar mar. Nacaybka ama naxariista ayaa jawaab u ah isdhexgalka aadanaha waxayna ku lug leeyihiin arrimo badan iyo doorsoomayaal.
Maqaalka soo socda ayaanu ku siin doonaa furayaasha si aad u noqoto mid bulsho iyo in la jecel yahay dadka. Miyaad seegaysaa?
1 Maxaa keena naxariis ama nacayb?
2 Sida loo noqdo dad badan oo bulsho iyo sida dadka tallaabo tallaabo
2.1 Baro naftaada
2.2 Jeclow naftaada
2.3 Ku kalsoonow naftaada
2.4 Ixtiraam kala duwanaanshaha
2.5 Ha ka baqin inaad qalad sameyso
2.6 Ahow naftaada
2.7 Hel jawaabahaaga
Maxaa keena naxariis ama nacayb?
Arrimo kala duwan ayaa dhalin kara jawaab celin xun, sida shakhsiyadda, muuqaalka, niyadda, kartida, iyo asalka shucuureed. Waxaa kaloo jira dhowr arrimaha dhaliya dareenka togan, sida aqoonsiga shakhsiyadda, dhadhanka iyo riyooyinka guud, bogaadin, naxariis iyo midnimo isku mid ah.
Mar kasta oo aad xidhiidh la leedahay qof, waxaad dhaqaajisaa dhammaan nuxurka shucuurtooda, kuwaas oo kicin kara xasuus xanuun ama jacayl, farxad ama murugo, cabsi ama xanaaq. Haddii aad lahayd hooyo aad u maamula, tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaad dareento xanaaq aad u weyn markaad la falgasho qof u dhaqma sida inay saxan yihiin oo aan cidna meel uga tagin inuu ku hadlo.
Tani waxay ka dhigan tahay in awoodda sInaad la noqoto dad wax badan oo is-aqoon ku leh ayaa ka badan naxariis. La xidhiidhinta dadka kale waxay ku xidhan tahay gaar ahaan awooda qofku u leeyahay inuu ka fikiro shucuurtiisa oo uu fahmo sheeko nololeedkiisa.
Sida loo noqdo dad badan oo bulsho iyo sida dadka tallaabo tallaabo
Talaabada ugu horeysa ee lagu kasban karo is-aqoonteeda iyo in aad noqoto qof la wada dhexgalo waa si qoto dheer u baro shakhsiyadaada, iyo sidoo kale awoodahaaga, xaddidaadaada iyo taariikhda noloshaada. Tani waa sababta oo ah dadku waa muraayado ka tarjumaya sida saxda ah ee aan nahay. Inta badan waan u xanaaqnaa ama aan necbahay qof sababtoo ah qofkaasi waa annaga oo kale, ama waa wax aan jeclaan lahayn inaan noqono.
Baro inaad naftaada jeclaato, oo leh dhammaan meelaha aad ku fiican tahay iyo meelaha aad ku liidato. Haddii aad naftaada u aqbali weydo sidaada, waxaa kugu adkaan doonta in aad dadka sida ay yihiin u aqbasho, adiga oo mar walba u malaynaya in dhibku dadka kale ku hayo.
Ku kalsoonow naftaada
Dhammaan dunida wuxuu leeyahay sheeko wanaagsan oo uu ka sheekeeyo, oo leh tusaaleyaal iyo waxbarid wanaagsan. Markaad isku kalsoonaato naftaada, waxaad lumisaa baahida isbarbardhigga iyo la tartamida dadka.
Ixtiraam kala duwanaanshaha
Maskaxda ku hay in qof kastaa uu ka duwan yahay oo uu leeyahay meelaha uu ku fiican yahay iyo meelaha uu ku liito. Aqoontan, baro inaad ku noolaato oo aad ixtiraamto kala duwanaanshaha shakhsiyaadka, aan abuurin rajooyin iyo niyad-jab xagga xiriirka.
Ha ka baqin inaad qalad sameyso
Dad badan ayaa door bida in ay gooni isu taagaan halkii ay halis gelin lahaayeen in ay ku hadlaan hadal aan macno lahayn oo ay khalad sameeyaan si fagaare ah. Bini'aadamku wuu qaldamaa, waxaana iska cad inaad marar badan khalad samayn doonto, laakiin waxbadhimashadu waxay joojinaysaa aqbalida ama jacaylka khaladka dartiis. Fahmo inaad tahay qof aan qummanayn, sida dadka kale.
Ha ku dadaalin in aad kala duwanaato, qof kastaa waxa uu leeyahay taariikhdiisa iyo sheekadiisa, dadkuna sidaad tahay ayay kuu jeclaysan doonaan. Dhammaanteen waan kala duwannahay oo gaar baan nahay mana aha lagama maarmaan in dadka oo dhami na jecel yihiin. Ahow naftaada oo ku hareero dadka ku jecel cidda aad tahay.
Ka fiirso sababta aadan ugu qanacsanayn qofka, dareenka ay kugu abuuraan, waxaad u baahan tahay inaad aqbasho ama cafiso. Tani waa muhiim, ma aha oo kaliya in la dhiso xiriir wanaagsan, laakiin si kordhinta garashadaada oo xalliya khilaafkiina gudaha.
Kuwani waxay ahaayeen dhammaan talooyinka lagu ogaanayo sida loo noqon karo dad badan oo la dhaqanka iyo sida dadka. Waxaan rajeyneynaa inaad dhaqan geliso oo aad ku caawiso hadafkaaga. Haddii aad xiisaynayso inaad kordhiso aqoontaada, sii wad daalacashada Disco.online oo ha moogaan inta kale ee maqaalladayada.